FAQs - Iibiya Ningbo Midowga Imp & EXP Co., Ltd.
Aagga Sahayda Xayawaanka
Aagga Alaabada Ciyaaraha
Qalabka Jimicsiga Gudaha
Alaabada Ciyaaraha Dibadda
Alaabooyinka Dhiirrigelinta Caadiga ah
Aagga Sheyga Kirismaska
Wakiilka Sare ee Shiinaha
Suuqa Yiwu Online
Shantou alaabta lagu ciyaaro suuqa
Ku saabsan Yiwu
Maaskaro FFP2 & KN95
1. Alaabtee ayaan ka iibsan karaa Suuqa Jumlada Shiinaha?
1. Qalabka kirismaska ​​iyo xafladaha 2. Alaabta 3. Alaabta caaga ah iyo kuwa guryaha ka kooban 4. Alaabada dhoobada iyo dhalada 5. Khaanadaha iyo boorsooyinka 6. Alaabta guriga iyo qurxinta guriga 7. Kabaha maqaarka ah iyo kabaha kabaha 8. Qalabka agabyada 9. Qalabka korontada 10. Iskuulka Adeegso alaabada 11. Dharka iyo labiska 11. Warqadaha sariirta iyo daboolida sariirta 12. Qalabka dharka 13. Waxyaabaha isboortiga 14. Alaabada xayawaanka 15. In badan oo badan oo
Yiwu oo ah xarunta ugu weyn ganacsiga adduunka. . Waxaad halkaas ka heli kartaa wax kasta oo aad rabto. Sababtoo ah gobol kasta wuxuu leeyahay xirfad u gaar ah, sidaa darteed waxaan ka dhisnay xafiis Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou si aan ula kulanno baahida macaamiisha.
2. Sidee yahay adeeggaagu?
1. waxyaabaha Source aad u baahan tahay iyo oraah soo
2. Bukit Market Guide iyo Factory hubinta
3. amar Place iyo dabagal saarka
4. repacking Product iyo qorshee
5. kormeerka iyo gacan ku haynta tayada
6. kaydinta iyo xoojinta adeega Free
7. U bandhigidda galinta tashi
8 Qaado dukumiintiyada laxiriira
9. Nadiifinta kastamka iyo rarka
Waxaan sameyn karnaa wax ka badan intaad u maleyneyso
3. Marka aan u tago yuhuuda, sideen u wada shaqeynaa?
1. Waxaad ii soo diraysaa jadwalka safarkaaga si ay kaaga caawiso inaad ballansato hudheelka iyo gaadiidka
2. Waxaan kuu diyaarin doonaa laba shaqaale si ay kuu raacaan oo uga shaqeeyaan suuqa ama warshadda
3. Waxaan u soo diri doonnaa dhammaan macluumaadka habeenka ama daabici doonaa dukumintiga subaxa dambe.
4. Waa inaad tagtaa xafiiskayga si aad u hubiso una xaqiijiso amarrada ka hor intaadan ka bixin Yiwu.
Waxaan kuu diyaarin waxyaalahan oo dhan ka hor, sida: hotel, gaadiidka, shaqaalaha, qalabka (tape, buugga, camera iwm ..), macluumaadka warshad, waxyaabaha sahleysaa helitaanka macluumaadka. Macaamiisha ha ka welwelina, shuqullada Bukit.
4. Qiimahaagu ma ka hooseeyaa alaab-qeybiyeyaasha 'laga keenay Alibaba ama lagu sameeyay Shiinaha?
Alaab-qeybiyeyaasha ku jira barnaamijyada 'B2B' waxay noqon karaan warshado, shirkado ganacsi, ama qayb saddexaad ama xitaa seddexaad dillaaliin.Waxaa jira boqolaal qiimo isla wax soo saarka ah waana mid aad u adag in la xukumo cidda ay yihiin adoo hubinaya degelkooda. Shiinaha kahor intaanay ogaan, ma jiro qiimo ugu hooseeya laakiin ka hooseeya Shiinaha.
Waxaan ilaalineynaa balan qaadka sicirka la soo xigtay wuxuu la mid yahay kan alaab-qeybiyeha mana jiro lacag kale oo qarsoon. Waxaan kuu soo bandhigeynaa hab fudud oo aad alaab uga iibsan karto alaab-qeybiyeyaal kala duwan oo laga yaabo inay ku yaalliin magaalooyin kala duwan.
5. Mudo intee leeg ayuu amarkayga qaadan doonaa?
. Waqtiga la bixinayo waxay inta badan ku xirnaan doontaa laba arrimood: helitaanka sheyga iyo adeegyada rarka.
. Waxaan macaamiisha siineynaa adeegyo gaadiid oo kaladuwan, sida xawaaraha, xamuulka hawada, Gaadiidka badda, gaadiidka tareenka, FCL iyo LCL.
6. Majiraa wax MOQ ah markaad amarro kaa bixinayso?
Haddii warshaduhu leeyihiin keyd ku filan, waan aqbali karnaa tiradaada;
Haddii aysan jirin keyd ku filan, warshaduhu waxay weydiin lahaayeen MOQ wax soo saar cusub.
7. Sideen lacag u bixinaa?
1. Kadib amarka ladiray, waxaad ubaahantahay inaad bixiso 30% qiimaha badeecada sida deposti noo ah (Alaabada ladagaalanka faafa waxay ubaahantahay inay bixiyaan 50% qiimaha badeecada oo dhigaal ah).
2. Bixi shuruudo lacag bixin dabacsan, xilli kasta oo lacag bixin ah T / T, L / C, D / P, D / A, O / A ayaa lagu heli karaa dalabkeena macaamiisha.
8. Haddii aan horay uga iibsado Shiinaha, ma i caawin kartaa inaan wax dhoofsho?
Haa! Ka dib markii aad adigu wax iibsato ka dib, haddii aad ka welwelsan tahay alaab-qeybiyeha oo uusan sameyn karin sida aad u baahan tahay, waxaan noqon karnaa kaaliyahaaga riixista wax soo saarka, hubinta tayada, diyaarinta rarka, dhoofinta, soo saarista kastamka iyo adeegga iibka kadib Lacagta adeegga waa laga gorgortami karaa.
9. Maxaad ugu baahan tahay wakiil ganacsi iibiya
1. In ka badan 80% warshaduhu ma laha shatigooda dhoofinta ee u gaarka ah
2. Warshadaha badankood ma haystaan ​​ku filan Isbaanishka iyo shaqaalaha ku hadla Ingiriisiga ee la shaqeeya iibsadayaasha heerka dhexe ee Shiinaha.
3. Inta badan alaab-qeybiyeyaasha waxay u xaqiijiyeen inay yihiin shirkad ganacsi oo ka jirta Shiinaha laakiin waxay iska dhigaan inay yihiin warshad dhab ah macaamiishana kama sheegi karaan macluumaadka beenta ah ee internetka.
4. Sidaa darteed ganacsade wakiil ayaa u baahan. Adeeg wakiilka wax iibsiga ee hal-joogsi wanaagsan ma yareyn karo oo keliya halista ka soo iibsashada Shiinaha laakiin sidoo kale wuxuu kaa caawin karaa inaad lumiso waqti, kharash iyo dadaal ku saabsan soo-saarista, xaqiijinta, xakamaynta tayada iyo adeegyada iibka kadib.
10. Maxaad tihiin xoog?
1. In kabadan 23 sano oo khibrad ah soo dejiye & dhoofinta wakiilka
2. In ka badan 1200 oo shaqaale ah. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaheena waxay leeyihiin khibrad 10 sano ka badan. Waxay si fiican u yaqaanaan suuqa waxayna had iyo jeer ka heli karaan alaab-qeybiyeyaasha saxda ah si hufan.
3. Kooxdayadu waxay dhiseen xidhiidh ganacsi oo xasilloon oo ay la leeyihiin in ka badan 10000 warshadood oo Shiine ah iyo 1500 macmiil oo ka kala socda in ka badan 120 waddan. Sida America, Brazil, Venezuela, Mexico, Colombia, Argentina, Spain, Peru, Paraguay iyo wixii la mid ah
4. Waxay ku yaalliin Yiwu, waxay kaloo xafiis ku leeyihiin Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou
5. Lahaanshaha 10,000m² showroom iyo 20,000m² bakhaar
6 500 + Shaqaalaha ku hadla Ingiriisiga iyo Isbaanishka si fiican
Waxaa jira xoogag badan oo aanaan soo taxin
11. Sideen ku tagi karaa magaalada Yiwu?
Bukit waa mid aad u dhow la Shanghai iyo Hangzhou, waxaad qaadan kartaa tareenka xawaaraha sare ama bas magaalada ka Shanghai, haddii aad u baahan tahay, waxa kale oo aanu kuu diyaarin kari waayeen baabuur in aad soo qaado garoonka.
Bukit ayaa sidoo kale line duulimaad ka Guangzhou, Shenzhen, shantou iyo Hong Kong ah.
12. Sidee ku saabsan amniga guud ee Yiwu?
Magaalada Yiwu waa mid aad u xasilloon oo xasilloon, waxaad arki doontaa ajaaniib badan oo lugeynaya xitaa waqtigu waa saqbadh. Waxay aadi doonaan baarka ama xaflada ayey la qaadan doonaan asxaabtooda.
Telefoonka: +86 136 6582 2859 (whatsapp / wechat)